Kunokuba uhlale izingane ekamu?
Omunye akufanele akhohlwe ukuthi omunye wemisebenzi esemqoka yabeluleki ukusiza abafundi bathole amathalenta namakhono abo, baziveze. Cabanga ngemibono kunokuba uthathe izingane ekamu lasehlobo, ukuze zonke ezinye zazo zibe usizo futhi zingenakulibaleka.
Amahora okuqala ekamu anzima kakhulu kumntwana, ngoba weza endaweni entsha, futhi wayengakazi kangcono abanye abafana namantombazane. Ngakho-ke, umeluleki udinga ukucabanga ngalokho okufanele akwenze nabantwana ekamu ngosuku lokuqala, ukuze bangabi nesizungu futhi babe nesithukuthezi. Yiqiniso, kungcono ukuqala ngokuphola. Ungamema abafana ukuqagela amagama omunye nomunye ngosizo lwamacebo, isibonelo: "Igama lami liqala ngombhalo" K "", noma "Igama lami lifana nomlingisi wezinganekwane ...". Kuyoba mnandi kubafana, uma wonke umuntu ekhala igama labo ku-akhawunti "emithathu". Bese ubuza labo abakhumbula igama labo. Ukuze uqhubeke uphathina, kungaba kuhle ukuthi izingane zikwazi ukuthi zivelaphi umuzi ezazo, ukuthi imuphi umdlalo awuthandayo, uma usuku lwabo lokuzalwa, njll.
Uma ukubhaliswa kwezingane sekuphelile, futhi ngaphambi kokudla kwasemini kunesikhathi esanele, kuyoba mnandi kubaqalayo ukuba bahlanganyele emisebenzini enjalo:
ukukhiqizwa kwamabheji ngamanye;
umhlobiso weminyango ekamelweni;
ukusungula igama lensiza;
ukufunda izingoma eziningi, izingoma, njll.
Ukuphendula umbuzo, ukuthi yini okufanele uyenze nabantwana ekamu, kufanele kukhunjulwe ukuthi akudingekile ukukhawulela isikhathi sokuphumula sabantwana kuphela kwimisebenzi yokuzijabulisa. Kubalulekile ukusebenzisa izikhombisi-ndlela ezahlukene zomsebenzi, ukunakekela ukuthuthukiswa kwengqondo, ngokomzimba, ekuziphatheni nasekuhlaleni komuntu wonke. Ukuqonda izidingo ezingokomzwelo zabafundi kuzosiza izivivinyo zokuhlola: "Umusho ongaqediwe" (uma ngidunyiswa, mina ...; ngithanda kakhulu ukuxhumana no ...; ngithanda ukufunda ...) noma "Ukukhetha okumangalisayo" (uma i-fish ibuza: "Yini oyidingayo? ", Ngizophendula ...; uma ngabe ngingumlingo, ngizokwenza ..., njll). Izimpendulo zale mibuzo zizokwethulwa ngumeluleki, ukuthi ahlele kanjani umsebenzi ngamunye ngomntanami ngamunye, yimuphi umsebenzi ongabanika abafundi, ukuze bawujabulele ukuwenza.
Ngakho-ke, ake sicabangele ngokuningiliziwe indlela engcono kakhulu yokuthatha izingane kanye nentsha ekamu.
Izinhlobo zomsebenzi ekamu
Amantombazane nabafana kunanoma yimuphi ubudala njengamabhayisikobho. Abakhanga nje kuphela ngokubamba iqhaza kubo, kodwa futhi ngesigaba sokulungiselela: ukuhlela umbhalo, ukudala izingubo, ukuhlobisa, ukuxoxa, njll. Ungakwazi ukuhlela ukusebenza ngokususelwa kwindaba yakho yezintandokazi, ifilimu ethandwayo.
Amathenda wezingane avezwe kahle ngesikhathi samakhonsathi, imincintiswano yama-oratorical nemidlalo yezemidlalo.
Zizwe ukuthi abantu abadala bazokwazi izingane ngesikhathi sokuhlanganyela emhlanganweni wezingane ezihlangene. Kuyo ungaxoxa ngezinkinga zekamu, inqola, imiphumela yomcimbi othile, uhlelo lweviki elizayo, njll. Abafundi bazoba nesithakazelo ekulungiseleleni izinkulumo kulezi zinkinga. Izingane ezindala ziyoba nesithakazelo ekuhlanganyeleni enkulumweni, lapho kuzokwazi khona ukuxoxa ngenkinga yangempela (isibonelo, "Ngabe kufanele ngiqale ukubhema?", "Kuwusizo kangakanani ukufunda incwadi?", "Ingabe umculo wamanje ulungile?", Njll. ).
Ngesikhathi samaholidi ehlobo abantwana kufanele bahlale bengaphandle. Kungcono kakhulu, uma abaholi behlela ukuhamba-ukuhamba okude, okuzohambisana nokuhlelwa izingoma, imidlalo. Ukuqonda, uma ngesikhatsi uhambo izingane zizokwazi ukubuka izinto zendawo, amasiko amasiko edolobheni elihlukile.
Ngezinye izikhathi isimo sezulu siletha. Kodwa kunezindlela eziningi kunokuthatha izingane ekamu uma kuvula. Ungahlela imicimbi enjalo:
ukufunda izingoma ezintsha;
ukuqhuba ukuhlolwa kwengqondo;
ukuncintisana kwama-portraits noma ama-self-portraits;
ukubhala izincwadi kubazali nabangani;
ukuqagela kwemigqa, ipuzzles noma puzzle puzzle;
ukuvakashela inqola emakhelwane;
imincintiswano yabadayisi bezinwele, abaculi abenza ukwakheka, njll.
Uma ngabe ingane ihlale edolobheni, ngeke ihlushwe ekamu lesikoleni noma. Iningi lezehlakalo ezixoxwe ngenhla zenziwa ngabacebisi lapha. Kodwa kunezinye izindlela zokuthatha izingane ekamu esikoleni:
ukuvakashela emyuziyamu wedolobha;
uya kuma-movie, yaseshashalazini;
Ukulungiswa kwezimakethe mayelana nesikole;
imidlalo esebenzayo esikoleni noma ezindaweni zesikole, isibonelo, "Sifuna ingcebo";
ukubamba iqhaza emibuthanweni yokucabangela: umqambi omusha, i-philologist yesikhathi esizayo, njll ;;
ukutadisha umlando wedolobha, isikole, njll.
Kunoma yikuphi, kunoma yiliphi ikamu ingane yakho, lizokhathalela ukuthuthukiswa ngokomzimba nangokomzwelo.
Izingoma ze-Easter ezinganeni
Izingubo zekwindla yezingane
Kungani kufanele uhambe nomntanakho nsuku zonke?
Ukulinganisa kwengane ngonyaka ongu-1
IzAga mayelana nentwasahlobo yezingane
Izinkokhelo ezikhokhelwayo zikhokhwa
Indlela yokuthola isisindo kwengane?
Izihloko ezenziwe ngesandla
Ingane iqala nini ukukhuluma?
Izandla esihlokweni esithi "Ecology"
Kanjani ukukhanya kusuka plasticine Smeshariki?
Winter fun izingane
Yondla izinsana zemikhiqizo emikhulu
Ukulima kwamakhukhamba - kanjani ukuthola isivuno esihle?
Ukuphikisa: indlela yokuvula ibhodlela lebhiya ngephepha lephepha
Umbhede wokhuni we-Bunk
I-Mirror self-adhesive ifilimu
Ungashintsha kanjani izwi empilweni?
Imbewu yezinja ezinganeni
Ukufakwa kwekhadibhodi ye-gypsum ngokubuyiselwa emuva
Yini okufanele ugqoke ihembe le-denim?
Umgexo onemihlobiso eyigugu-imihlobiso
Imithi ephumelelayo yokulahlekelwa isisindo
Ukuqoqwa kokwakheka kwe-Autumn Lanka 2013
Abadlali be-series "I-Fair Fair Nanny" baye bashintsha kanjani eminyakeni engu-13?
Ihlaselwe ngezingqwaba eside